Makarakara harato - China Hebei Samsung Metal Wire harato
Mety Fitaovana vokarina avy karbaona makarakara vy, aliminioma, Stainless vy, ary alloys manokana dia manome azo antoka, Functional, mateza vokatra ho an'ny tontolo rehetra. Ny tombony, fampiharana manokana sy ny endri-javatra amin'ny harato makarakara: Steel makarakarany manome ireto tombony raha oharina amin'ny vy Grid taratasy: Steel makarakarany manana lanja fahazavana, hery tsara, fahaizana mitondra izany lehibe sy afaka mamonjy fitaovana sy ny vola. Manolotra rivotra tsara ny mazava sy ny rivotra, ny ankehitriny ny hoe hatsarana ...
Min.Order Quantity: 5 Ton /-taonina
Supply Fahaizana: 400 Ton /-taonina isan-kerinandro
makarakara vy vokarina avy karbaona, aliminioma, Stainless vy, ary alloys manokana dia manome azo antoka, Functional, mateza vokatra ho an'ny tontolo rehetra.
Ny tombony, fampiharana manokana sy ny endri-javatra amin'ny makarakara harato:
Steel makarakarany manome ireto tombony raha oharina amin'ny vy Grid taratasy:
Steel makarakarany manana lanja fahazavana, hery tsara, fahaizana mitondra izany lehibe sy afaka mamonjy fitaovana sy ny vola. Manolotra rivotra tsara ny mazava sy ny rivotra, ny ankehitriny ny hoe hatsarana tarehiny sy ny anti-skid fiarovana. Tsy mora koa ny madio, mora ny hametraka sy mateza ho an'ny fampiasana.
Makarakara harato vokatra dia natao sy vokarina ho an'ny isan-karazany indostria sy ny sivily fanorenana in-tanàna lalana, zaridaina, tokotany, seranam-piaramanidina, lalamby sy ny orinasa injeniera, ka dia manolotra izao manaraka izao ny endri-javatra:
* hatsarana fomba fijery: Simple tsipika sy volafotsy tarehy fivoriana ny ankehitriny fironana.
* Ny tsara indrindra drainage: Leakage faritra 83,3 isan-jato, mihoatra ny avo roa heny ny vokatra niampatra vy.
* Hot-mandroboka nandrisika fitsaboana: Tsara harafesina-porofo fananana, fikojakojana-malalaka fanoloana.
* Anti-halatra famolavolana: Ny fonony sy ny toetsika dia mpiray amin'ny fanatitra miankina fiarovana, ny fiarovana sy ny tsy hanahirana misokatra.
* Tahiry fampiasam-bola: Lehibe androm. Tsy very fa enta-mavesatra raha oharina amin'ny vy niampatra vokatra. Cost afaka ny ho voavonjy noho ny mety ho halatra na hanorotoro ny iray raha nitora vy no fampiasana.
* High hery: Ny hery sy ny diso mikasika ny Fahasarotana be dia avo noho ario vy. Azo ampiasaina amin'ny terminal, seranam-piaramanidina sy ny lehibe sy mavesatra androm-toe Loading.
Previous: Mitono hena Grill Netting
Manaraka: Plastic Netting